Igama elithi Sandoval Meaning and Origin
Igama lesiSpeyin elithi Sandoval liyigama eliqhelekileyo elivela kwiindawo ezibizwa ngokuba yiSandoval, ngokukhethekileyo kwidolophana yaseSandoval de la Reina kwisifunda saseSpanish saseBurgos. Igama legama elithi Sandoval livela njengeSanval, ukusuka kwisiLatini i- saltus , esithetha "i-grove" okanye "ihlathi," kunye ne- novalis , okanye "umhlaba osanda kuhluthwa."
I-Sandoval yi- 55 yeyona nkcukacha ngokuqhelekileyo yaseSpain .
Igama elithethiweyo Ukuchazwa : DE SANDOVAL, SANDOBAL, DE SANDOBAL, ISANDOVEL
Abantu abaPhezulu abaneSurname SANDOVAL
UBrian Sandoval - i-Nevada.
I-Pablo Sandoval - Iimpawu ezinkulu ze-MLB ze-baseman.
UVicente Sandoval - Mongameli waseGuatemala kuma-1960
UManuel Sandoval Vallarta - wefilosofi waseMexico, owaziwayo ngokufunda kwakhe imisebe ye-cosmic
Uphi abantu abaneSandoval Surname Live?
Ngokwe-Public Profiler: Ihlabathi leNinzi ininzi yabantu abanegama leSandoval lihlala eArgentina, lilandelwa ziinkalo e-United States, e-Austria, eFransi naseSwitzerland. I-Public Profiler ayifaki inkcazelo evela kuwo onke amazwe, nangona kunjalo, kuquka iMexico neVenezuela.
Izibonelelo zoGenesalogy for Name SANDOVAL
UGarcia, Martinez, Rodriguez, Lopez, Hernandez ... Ngaba unye yezigidi zabantu abantu bezemidlalo enye yezona zi-100 eziqhelekileyo amagama aseSpeyin?
Projekthi yeDNAval DNA
Iprojekthi ye-Sandoval Y-DNA ivulelekile kuzo zonke iintsapho ezinegama leSandoval, kuzo zonke iinguqulelo zesipelingi, nakuzo zonke iindawo.
I-GeneaNet - i-Sandoval Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweenkcukacha, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abaneSnameval, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi, eSpain nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-SANDOVAL yoLuntu lweGenaalog Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wefayile yeSandoval ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho weSandoval.
Uhlobo loSapho -SANDOVAL Genealogy
Fumana iirekhodi zembali, imibuzo kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca esithunyelwe kwiSnameval kunye nezohluko zayo.
I-SANDOVAL Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLwazi lweeNtsapho
I-RootsWeb iyabamba amanqaku amaninzi angabhaso adibanisa abaphandi begama leSandoval.
DistantCousin.com - I-SANDOVAL Genealogy & History Family
Iinkcukacha zolwazi zamahhala kunye neefalo zodidi lwegama lokugcina igama elithi Sandoval.
UMORRIS - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Yohane Marko - Umbhali weVangeli likaMarko
I-Postal Viral Iingcebiso ze-Scand Phone Scam
UkuPhathwa kwangaphambili OkuPhambili: Ukucinga okukhoyo
'Isiqhwithi' - Isikhokelo soFundo
Iimidlalo ezili-10 ezitsha zokudweba zezingane